STRAWBERRY "KIMBERLY": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA IYO BEERISTA AGROTECHNOLOGY - STRAWBERRIES
Noocyo strawberry "Kimberly": dabeecadaha, xeerarka beeritaanka iyo daryeelka
Noocyada strawberry "Kimberly" ayaa noqda mid sii caan u ah beeraleyda iyo beeraleyda, ugu horreyn sababtoo ah xilligii bislaanshaha hore, sababtoo ah waa miro cusub oo cusub oo ka muuqda miiskeena ka dib jiilaal dheer - ugu macquulsan, oo, sidaas darteed, ugu qaali ah.
Qeexida noocyo strawberry ah "Kimberly"
Nederlandka noocyada kala duwan ee nooca strawberry waa Nederland, iyo "waalidkeed" waa Chandler, waa noocyo aad u ballaaran oo adag, taas oo sidoo kale si fiican looga yaqaano dalalkeena, iyo noocyada kala duwan ee Gorella, oo aan ka yarayn waddankeena.
Ma taqaanaa? Dhab ahaantii Kimberly - Waa strawberry, ma aha strawberry. Dad aad u yar ayaa fahamsan farqiga u dhaxeeya labadan dhirta, iyo xitaa beeralayda iibiya miraha iyo geedo, sida caadiga ah, ugu yeer strawberries strawberries - mararka qaarkood waa in la dalbado oo laga fogaado su'aalaha aan loo baahnayn, marmarka qaarkoodna jahli la'aanta. Strawberry Real - Tani waa gabi ahaanba gebi ahaanba kala duwan, taas oo ah mid dhif ah, oo leh miraha yar yar, midabka aan midabka lahayn ee ubaxyada iyo ubaxyada kala duwan.
"Kimberley" waa baadiyaha caan ah oo leh tiro yar oo caleemo wareeg ah oo yar, oo si tartiib ah u kala firdhiyey dhinaca, oo aan kor u dhaafin. Berry waxay sidoo kale yihiin kuwo waaweyn iyo quruxsan, furan, aad u caraf badan oo macaan, laakiin aan xoqin.
Waa muhiim! Faa'iidada shakiga ah ee kala duwan yihiin waa Bisaylkiisa hore ee dalagga, laakiin strawberry this, si ka duwan noocyo kale, dhirta miraha kaliya hal mar sanadkii.
Iyada oo daryeel ku habboon laga helo hal baadiyaha waxay qaadan kartaa ilaa 2 kg oo miro ah. Dabcan, si loo gaaro natiijooyinkaas, waa lagama maarmaan in la noqdo xirfad dhab ah, laakiin dadaal badan, qoryaha yar ee Kimberley wuxuu siinayaa qoyska oo dhan fursad ay ku raaxaystaan ​​miro cusub oo dhadhan fiican leh.
Qodobbada beerista "Kimberly" ee goobta
Strawberry "Kimberley" oo ku saabsan tiknoolojiga beerashada iyo daryeelka ayaa la mid ah noocyada kale ee strawberries. Guud ahaan, sida noocyada hore ee hore, warshadani waxay leedahay heer sare baraf u adkaystawaxay u dulqaadataa abaarta si aad u fiican.
Hase yeeshee lama sheegi karo in tani ay tahay dhaqan aan qabyo ahayn. Under xaaladaha cimilada dabiiciga ah, baadiyaha ku noolaan doonaa, laakiin tayada dalagga iyo xajmiga berry si weyn u yareeyaan. Dhamaan arrimahan iyo baahidooda badan waxay tahay in maskaxda lagu hayo markaad dooranaysid beerta beerta "Kimberley" si ay u sii kordhiso dacha.
Dad badan ayaa leh su'aal, sida loo doorto strawberries beeritaanka. Ka dib oo dhan, inta badan waxay dhacdaa in jecel yihiin beeray geedo si fudud ma badbaadi jiilaalka ama diidaan in ay midho u dhali dhammaan. Si looga fogaado tan, waxaa habboon in la xasuusto xeerar yar.
Ma taqaanaa? Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan la sameyn waa inay iibsadaan geedo laga helo shisheeye iyo meelo aan loogu talagalin tan. Hagid - La kulan beeralayda aad ka iibsatay midhaha aad jeceshahay oo aad isku raacdid iibinta geedo horay loo sii iibsaday.
Xitaa haddii aad raacdo xeerkan, fiiri duurka aad iibsato. Waa suurad wacan in midabka caleemaha uu ahaa mid isku mid ah oo cagaaran qani ku ah, iyada oo aan laheyn wax dhib ah ama waxyeello kale, taas oo tilmaamaysa in baadiyaha uu ku dhaco infekshanka fangas.
Kama hortagi karto inay caadi ahaan soo baxdo, laakiin waxay sidoo kale ku dhici kartaa dhir kale oo agtaada ah. Jiritaanka cudurku wuxuu calaamad u yahay caleemaha caleemaha, calaamadkuna waa ka khatar badan yahay dhibco madow. Sida horey loogu soo sheegay, strawberries caafimaad leh "Kimberly" caleemo waa dhalaaliye.
Waa muhiim! Ma iibsan kartid geedo, kuwaas oo caleemaha yaryar ay u muuqdaan kuwo yar yar oo la jajabiyey - Warshadani waa jiran tahay!
Haddii aad iibsato geedo aan baako lahayn, xididdadiisa waa inay lahaataa dhererka ugu yaraan 7 cm. Haddii baadiyaha ay ku koraan koob hufan, hubso in xididada ay buuxiyaan qaybta dhulka hoostiisa. Xaalad kasta, xididada waa in aan la dhaafin - sida warshad ma degi karto.
Haddii aad soo iibsatay geedo "qaawan" isla markaana aanad beeranayn, maanta ku kaydi weel biyo ah (tani ma aha oo keliya badbaadinta dhirta laga bilaabo qalajinta, laakiin sidoo kale ka buuxi qoyaan lagama maarmaan ah oo sahal u samaynta meel cusub).
Malvina, Festivalnaya, Marshal, Lord, size Ruush, Aasiya, Masha, Queen Elizabeth, Elizabeth 2, Gigantella, Albion.
Goorta iyo meesha lagu beero
Waxaa jira labo waji ah marka aad ku beeran karto strawberries ee dhulka furan: waxaa jira taageerayaasha labada dayrta iyo beeritaanka guga labadaba. Halkan waxaa lagama maarmaan ah in la fahmo in geedo tayo sare leh ee strawberries soo muuqdaan isla markiiba ka dib dhamaadka qabow, ama, si tartiib ah, dayrta, marka kulaylku bilaabmaa inuu hoos u dhaco.
Laga soo bilaabo aragtida aragtidan, dalabku waa suurto gal laga bilaabo bartamaha Abriil ilaa tobanka sano ee ugu horreeya May ama bilaha Ogosto-Sebtembar. Meelaha leh cimilada kulul, strawberries waxaa lagu beeray dayrta dhammaadkii Sebtembar iyo xitaa horraantii Oktoobar. Wakhtigan, weli waa mid aad u caan ah oo u ogolaanaya caleemaha yar yar ee aan ku gubin qoraxda kulul.
Cimilada xilligan waa mid aad u khafiif badan xagaaga, iyo in badan oo la saadaalin karo, ma jiraan wax dheeraad ah oo ku saabsan goobta ka badan guga, taas oo ah sababta bannaanka u badan door bidaan beeritaanka dayrta ee this dilka ah.
Ma taqaanaa? Strawberries "Kimberly"ku koray aqalka dhirta lagu koriyo, ma aha sida dhadhanka sida ka soo beerta, sidaas awgeed noocyo kala duwan ayaa la doorbidi karaa in ay koraan dhulka u furan.
Iyada oo la raacaayo beeritaanka guga, waxaad fursad u heli kartaa fursadda. ku adkaata dhaxan. Laga soo bilaabo halkan aragtida, waxaa fiican in la beero strawberries bilawga xilli ee dadka deggan meelaha qaboobaha.
Strawberry kasta wuu jecel yahay qorraxda, laakiin Kimberley ayaa si gaar ah uga dalbaday qadarka iftiinka. Dhinaca kale, meel aad u furan oo ay u furan yihiin gustsada si lama filaan ah, sababtoo ah warshadani sidoo kale waa mid liidata, waana inaad isku daydaa inaad doorto aag la ilaaliyo sariirta.
Waa muhiim! Strawberries si fiican u koraan sariiraha, oo ku yaalla qiyaastii yar ee koonfurta.
Ciidda waa in aan la daboolin oo u dhaafin qoyaanka. Waxaa wanaagsan in ciidda ku jira ciid iyo peat isku dar ah.
Markii hore, waa inaad si taxadar leh uga saartaa dhammaan haraadiga dhirta kale iyo haramaha, ooy kamid yihiin xididada, iyo sidoo kale, haddii loo baahdo, jeermiga dhulka (waxa lagu talinayaa in tan la sameeyo ka hor si aan suntu u burburin duurka dhalinyarada).
Waa muhiim! Tamaandho, eggplants, basbaaska iyo qaar kale - kuwii horay u soo maray ee loo yaqaan 'strawberries'.
Geedo strawberry waxay u baahan yihiin in la beeray meel fog oo ku filan oo ka fog midba midka kale (qiyaastii 30 cm). Markaad sii dayso shaar cusub, waxaad heli doontaa sariirta dhabta ah ee daraasad darsin ah hal ama laba xilli.
Ma taqaanaa? Hooska ayaa lagu qodaa qoto dheer oo ku filan si markaa u jiifto ka dib marka ay duurka u yihiin wax yar ka hooseeya heerka dhulka. Marka hore, habkani wuxuu u oggolaanayaa in si fiican loo sii hayn lahaa qoyaan, kuwaas oo geedo gaar ah u baahan tahay bilaha ugu horeeya ka dib markii beerista, iyo labaad, duurka strawberry waxay u muuqdaan in ay kor u kordhay waqti dheer.
In meel kasta oo ka hor beerto, waxaad ku dari kartaa ash yar, compost ama humus. Dhexgelinta geedaha daloolka, waa inaad hubisaa in hareeraha hareeraha aysan jirin farqiga hawada.
Waxa kale oo muhiim ah in la hubiyo in barta kobaca ee loo yaqaan (hadana ku hadla, meesha uu xididku ku dhammaanayo iyo astaamaha bilaabmaa) waa heer dhulka ah. Haddii aad baadho baadiyaha aad u qoto dheer, wuu qudhmi doonaaiyo haddii aad dhashay - ma noolaan doonto qabowga.
Isla markiiba ka dib markii la beero, duurka waa in la waraabiyo si fajac ah. Marka la beero xilliga dayrta, waxaa sidoo kale lagu talinayaa in la gooyo caleemaha qadiimka ah, ka tago oo kaliya kuwa ugu yar, sidaa darteed qiyaasta cagaaran oo dheeraad ah ma soo jiidin xoogga warshadda dabacsan. Gooyo ayaa sida ugu fiican loo sameeyaa marka biyaha dhoobo kadib marka ugu horeysa ee la waraabiyo, isla mar ahaantaana la qabsado caleemaha "dhoobo" leh wasakh.
Talooyinka Daryeelka Strawberry "Kimberly"
Daryeelidda strawberries "Kimberly" ma aha mid aad u adag, laakiin ilaa iyo inta uu dhirta aan si fiican u rujin, waxay u baahan doontaa wax yar oo dheeraad ah.
Bannaanka waaya-aragnimada leh waxay ogtahay in aad ka heli doonto biyaha strawberry, si toos ah ku xiran tahay goosashada. 10ka maalmood ee ugu horreeya ka dib marka la beerto, dhallinyaradu waa in la waraabiyaa maalin walba (subaxa ama fiidkii), ka dib marka biyaha la nuugo, si tartiib ah si aanad u taaban xididada, furo ciidda, isaga oo ka hortagaya inuu soo galo buro oo uu bilaabo inuu jabo.
Gubashada ugu weyn uma baahna waraabin badan, laakiin marka ay kulul tahay oo dhulku u engegay, baahida dhirta ee qoyaanka lama dhimi karo. Isla mar ahaantaana waraabinta waxaad u baahan tahay sariirta, sababtoo ah caws ayaa si fudud looga saaraa dhulka qoyan.
Cunto strawberries "Kimberly" waxay u baahan tahay celcelis ahaan afar jeer xilli ciyaareedkii: isla markiiba ka dib barafka dhalaalayaa iyo daboolka laga saaro, ka hor inta ubax, inta lagu jiro, iyo ugu dambeyntii, dhammaadka xagaaga, si loo xoojiyo dhirta ka hor jiilaalka iyo diyaariyaan for fruiting soo socda.
Beeralayda qaarkood waxay isticmaalaan jadwal yar oo kala duwan oo bacriminta ah: dharka saddexaad ayaa la qabtaa ka dib marka la sameeyo fruiting, iyo afaraad - horraantii Oktoobar.
Strawberries waxay u baahan yihiin Bacriminta organic iyo macdanta. Waxaa wanaagsan in la isticmaalo bacriminta beeraha, humus, mullein, carbamide ama HOL (marka hore, horay u quudinta), ash qoryaha, iyo sidoo kale superphosphate ama Bacriminta adag oo ay ku jiraan fosfooraska, potassium iyo nitrogen.
Strawberries, gaar ahaan inta lagu jiro xilliga fruiting, si aad u liidata leh haramaha, iyo sidoo kale u dulqaadashada qalajinta ka soo ciidda. Nuugidda ciidda waxay caawisaa xallinta dhibaatadan, sidaa daraadeed xitaa haddii aadan ahayn taageere qalabkan agrotechnical ah, markaad sii kordheyso strawberries waxaa haboon inaad u sheegto.
Waqtiga saxda ah ee mulching waa muddada ubax firfircoon, isla markiiba ka dib markii aad ogaatay bilowga ah ee abuurka ugxan.
Waxaa jira qalab badan oo ku haboon mulching strawberry. Kuwani waa filimo gaar ah, iyo dhar madow, oo macnaheedu yahay cilad-caws, caws engegsan ama caleemo, balka ama bacda qallalan.
Waa muhiim! Ka hor inta aanad u isticmaalin mulch, waxaa si xoog leh lagula talinayaa in lagu qalajiyo cawska ama cawska si aad u fiican qorraxda kuleylka ah, sidaa daraadeed dhammaan noocyada cayayaanka iyo cagaarka ee ku jiri kara ay u dhiman karaan mana waxyeelayn karaan sariirta beertaada.
Waa in sidoo kale maskaxda lagu hayaa in bacaha iyo irbadaha loo isticmaali karo ciidda alkaline, maadaama maaddooyinkaasi ay kordhiyaan kiimikada ciidda.
Kimberley Strawberry waa mid aad u muhiim ah faa'iido: way ka yaryihiin noocyada kale ee berrigan, oo ay saameeyeen wax xayrta leh, cadowga ugu weyn ee strawberries. Laakiin weli cayayaanka iyo cudurada had iyo jeer ma dhaafaan dhirta, si joogto ah baaritaan joogta ah ee sariiraha waa element ah oo aan lagama maarmaan beerashada strawberry.
Gaar ahaan, laga bilaabo funguska cudurada, Kimberly waxa uu u nugul yahay dhibaatooyinka leh dhibco madow (calaamadaha u dhigma waxaa laga arki karaa caleemaha dhirta), iyo cayayaanka ee berry, caarada caarada, nematodes, weevil strawberry ayaa lagu hanjabay.
Tallaabooyin ka hortag ah oo lagaga hortago cudurada noocan oo kale ah waxay ku beeri doonaan sariirta strawberry ama si toos ah u dhexaysa duurka shakhsiga ee toon caadiga ah.
Ma taqaanaa? Strawberries iyo toon - jiiraan quruxda badan, oo si fiican isu dareemaan shirkad kasta.
Iska ilaalinta infekshanka kalluunka ayaa ku lug leh wakhtiga ka saarista caleemaha qalalan iyo maqnaanshaha biyo-ku-dhigga ee xididdada. Maadaama ay tahay mid aan suurtagal ahayn in la daaweeyo cudurkan, waxaa lagu talinayaa in lagu buufiyo duurka iyagoo leh fungicide ku haboon ka hor ubax (tusaale ahaan, daroogada kakan Topaz waa ku habboon ujeedadaas).
Markaad sii kordhiso strawberries, waxaad u baahan tahay inaad ogtahay oo dhan nuucyada: dhar xidhashada dayrta iyo gu'ga, daryeelka inta lagu jiro ubax iyo ka dib goosashada.
Insecticides waxaa badanaa loo isticmaalaa ka hortagga cayayaanka (waxaad dhahdaa, "Flyoverm"), laakiin marxaladda ugu horreysa ee infekshanku mararka qaar waa ku filan tahay in lagu daweeyo xooraha saabuun iyo biyo. Nasiib darro, baadiyaha, ku dhuftay nematode, waa ku dhowaad aan suurtagal ahayn in la badbaadiyo.
Marka la ogaado calaamadaha cudurka (caleemaha cagaaran, qaabka aan caadiga ahayn ee berry, deformed iyo gaaban afuufaha), si aan u burburin beerka oo dhan, warshad buka waa in si taxaddar leh loo qodo oo laga saaraa goobta ama gubay.
Sida kor ku xusan, ka dib xilliga dayrta beerto dhalinyarada da'yarta u baahan tahay in laga xoreeyo caleemo jir ah. Nidaam isku mid ah ayaa la sameeyaa duurka sannad kasta ka hor "xidhitaanka xilli-ciyaareedka."
Waxaa la aaminsan yahay in manjooyin noocan oo kale ah waxay xoojisaa baadiyaha waxayna kordhisaa goosashada mustaqbalka. Si kastaba ha noqotee, tani maaha mid dhamaantood. Marka strawberries la goosto, duurka waa in sidoo kale la gooyaa, tegaayo caws kaliya si dhiiri koritaanka firfircoon ee firfircoon ee caleemaha dhalinyarada.
Sidoo kale, beerista strawberries ku lug leh ka saarista si joogto ah ee whiskers, haddii kale dhammaan casiirnada muhiimka ah ma tagi doono berry, laakiin geedi socodka lateral.
Ma taqaanaa? Haddii aad rabto in aad ku dhufatid strawberries leh shaarib ah, waxaad u baahan tahay inaad tan sameyso ka dib markii berry uu soo baxo, oo dooran kaliya hal, geeddi-socodka ugu xoogan, inta kale ee aan si daacad ah loo saarin. Ku celi balawaadka (shinbiraha shimbiraha) maaha kuwo ku habboon taranta.
Beeralayda khibradda leh waxay ku talinayaan in ay u kala qaybiyaan duurka kuwaas oo ka soo baxa dalagga, iyo kuwa loo isticmaali doono taranta. Fursad kale: in loo qoondeeyo hal sano oo kaliya kaliya dhalmada ee strawberries, sidaas oo ah u ducaynayaa goosashada.
Faa'iidada iyo waqti isku mid ah la'aanta qashinka Kimberley (iyadoo ku xiran waxa aynu rabno - si aad u hesho beeritaan ballaadhan ama midho badan) waa taas, marka la barbardhigo noocyada kale, shaararkeeda si dhakhso ah uma korin.
Kimberley waa berry jiilaalka-adag, laakiin tani macnaheedu maaha in si badbaado leh looga tagi karo "u naxariisto qaddarka" illaa guga.
Kaliya kuwa hubiya in aysan jirin wax mushkilado ah oo ku saabsan xaddiga barafka ee xilliga jiilaalka awoodi karin inay daboolaan strawberries xilliga jiilaalka. Marka la eego xaaladaha dabiiciga ah, waa baraf aan u oggolaanin in warshaduhu qaboojiso xilliga jiilaalka waana difaaca ugu fiican.
Laakiin tan iyo cimilada cimilada maanta waxaa lagu gartaa isbeddel dhab ah, ma aha mid u qalma rajada dabiiciga ah. Digaagdarrada strawberry la jarjaray waa in lagu daboolaa agrofibre, cufan ama xayawaan raspberry iyo wax kale.
Waa muhiim! Straw iyo geedka caleenta - Guryaha xun, maadaama ay cayayaanka iyo cayayaanka cayayaanka si fiican ugu noolaadaan, sidaas darteed hoygaan wuxuu wax badan ka qaban doonaa waxyeellada ka badan. Intaa waxa dheer, waxaa jira khatar ah in dhirta ay bilaabi doonto in lageeyo qoyaan aad u badan iyo boogooyin soo noqnoqota. Sidoo kale looma isticmaali karo hoyga madow ama dharka - tani waxay sidoo kale keeni kartaa kallana.
Markaad isticmaasho mashiinka daboolka, waxaa lagu talinayaa in la dhiso meelo yaryar si ay hawadu u dhexeyso duurka iyo hoyga. Waxaa la aaminsan yahay in tani ay badbaadin doonto dhirta laga yaabo inay xitaa khafiifiso. Laakiin dhibaatada waxaa lagu xallin karaa si fudud: dhalada caaga caaga ah u dhexeeysa duurka, daboolo sariirta beerta dushiisa, oo hoos u riix geesiyaasha dhagaxyada ama miisaan kale.
Sameynta shuruucdan fudud waxay xaqiijineysaa in dhamaadka gu'ga miiskaaga ay jiri doonto baaquli oo leh carafo carafeed oo aad u karsan "Kimberly".